Puntlandtimes (Galkacyo)-Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa lagu qabtay kulan u dhaxeeyay mas’uuliyiinta Maamulada gobolka Mudug ee Puntland & Galmudug, kaasi oo looga arrinsanayey ammaanka magaalada Galkacyo guud ahaanba gobolka Mudug.
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdi ladiif Muuse Nuur ayaa sheegay inay kulanka diirada ku saareen la dagaalanka Al-Shabaab, arrimaha sugida Amniga doorashooyinka sidii loo xadidi lahaa sarifka iyo ka hortegida dagaalada dhex-mara maleeshiyo beeleedyada iyo arrimo kale.
Docdiisa guddoomiya gobolka Mudug ee Maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Diiriye Isxal ayaa sheegay in labada maamul iyo Ciidamadadooda ay ka mideysan yihiin sugida Amniga degaannada galmudug una diyaarsan yihiin inay ka hortagaan falalka Amni darro.
Mas’uuliyiinta ayaa sheegay in ciidamada Puntland iyo Galmudug ay siwadajir ah u fulin doonaan howlgallo amniga lagu sugaayo, isla markaana wada-shaqeyntaas ay tahay mid horumar amni u horseedeysa shacabka labada Maamul.
Nice job puntland and galmudug .
Hadey fahmen Magalada Galkacyo in si nadab ah ugu wada noladan waa Guul ween oo uso hoyatay Galmudug & puntland.
Mudug i6o GAALKACYO wofkastoo Sonali ah baa leh lama kala xigo,, nabad hadey soo hoyatonwaa guul soomaaliyeed, waana bogaadinayaa ani goo reer gaalkacyo ah.. nabad iyo Burqaaaqo allaah ka yeelo Somalia iyo mudug ba